မိုးယံဖျားက၊ ဝေရ မ္ဘလေ၊
အိမ်ပြန်ချင်သော ညီမငယ် မိုးအိမ်သို့ ..
အစ်ကို ဟယ်ရီ ရဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင် ကဗျာမွန်!
တစ်နေ့နေ့. ... ကျွန်တော်တို့ အိပ်မက်တွေကို ပြန်လည်ရွာသွန်းမယ့်နေရာလေးဟာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ် ဖြစ်ပါစေလို့ အမြဲ မျှော်လင့်နေမိတယ် အစ်ကိုရေ....)
ပြန်တွေးမိတဲ့ အရာလေးကိုလည်း အမှတ်တရ တင်ဖြစ်ပါတယ် :)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခံစားချက်တို့ စစ်မှန်စွာ ခိုလှုံတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခံစားချက်တို့ ညီတူညီမျှ မျှဝေတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခံစားချက်တို့ နွေးထွေးလုံခြုံတယ်
မိုးတွေသည်းလည်း ဒီမိုး,မသည်း တဖွဲဖွဲ
နေရောင်ပြင်းလည်း ဒီနေမင်း အလင်းတသဲ့သဲ့
တစ်ချိန် ပြန်နားခိုမယ့် ငှက်ကလေးများကို
ကျွန်တော်တို့ ပြန်မယ့် အိမ်
ကျွန်တော်တို့ကို ကြိုနေတဲ့ အိမ်….။
ကဗျာလေးအတွက် ကျေးဇူး အထူးပါ အစ်ကိုရေ...။
"အိမ်အပြန်" ဆိုတဲ့အတိုင်း အိမ်ပြန်ချင်တဲ့ မောင်နှမတွေ တစ်နေ့ အိမ်ပြန်လို့ အိပ်မက်တွေ အိမ်တစ်နေရာမှာ ရွာသွန်းနိုင်ပါစေ....။
Posted by ဂျွန်မိုးအိမ် Labels: ကဗျာ_အတွေး, လက်ဆောင်, အိမ်
ကဗျာအရေးကောင်းတယ်နော် ..း))
အားလုံးရဲ့ အိပ်မက်တွေကို ပြန်လည်ရွာသွန်းမယ့်နေရာလေးဟာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ် ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုထပ်တောင်းသွားပါတယ် ..း)
ဒီ တစ်နှစ်မွေးနေ့က အရမ်းကို ပျော်စရာ ကောင်းသွားတယ် စစ်ရဲ့....။
ကဗျာ လက်ဆောင်တွေ အများကြီးကို ရတာပဲ...။
ပေးတဲ့ဆုတွေနဲ့ ပြည့်စေဖို့ အပြည့်အ၀ မျှော်လင့်မိနေတယ် :D
သိပ်ကောင်းတဲ့ကဗျာလေး မာန်အပြည့်ရှိတယ် . . . .
ဦးနှောက်ထဲက အိပ်မက်တွေ ဖုတ်ဖက်ခါ ပြုတ်ကျလည်း
အရိပ်ပြ နတ်သမီးက အမြဲ စိုးမိုးနေဆဲပေါ့....။ ဟုတ်တယ်ဟုတ် ???
ပြန်ပေါ်လာတော့လည်း အရိပ်ကလေး ပြရုံပေါ့ :)
သူ့အိမ်မှ မန့်လို့မရလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ လှမ်းပြောရတော့တယ်... :P